Barattoota Qaroo Oromoo 8 irratti Dr. Laaqew Wondimmuu Itti aanaa Pirezedaantii Amboo tarkaanfii hamaa fudhateera.!! - Welcome to bilisummaa
Barattoota Qaroo Oromoo 8 irratti Dr. Laaqew Wondimmuu Itti aanaa Pirezedaantii Amboo tarkaanfii hamaa fudhateera.!!
bilisummaa June 24, 2014	Leave a comment
Namtichi Amaarri Laaqew jedhamu kun Yunivarsiitii Amboo keessatti dargaggoo Oromoo irratti badii hamaa fudhachaa turuunsaa bubbuleera. Keessumattuu yeroo itti barattoonni Oromoo goldmedalia’ argatanii turanitti jijjiiruudhaan warreen qomoon Amaara ta’an akka fudhatan taasiseera. Warreen siyaasa adeemsisan manasaafi biiroosaatti waamuudhaan waliin mariyachuun qaroo Oromoo ol adeemoo hedduu karaatti hambisaa tureera. Waa’eesaatiif qeerrn Amboo waan kuusnee ol keenye baay’ee waan qabnuuf yeroo dhiyoo keessatti mana inni qabenyaa Yunivarsiitii saamuutiin Miliyoona lamaa oliin magaalaa Amboo keessatti ijaarsisee namoota achi keessa barsiisani warra hindootaatti maallaqa guddaan kireessisuun cinatti PhD isaa biiroo keessa taa’ee Profeseroota hindii dhufaniin fichisiifatee utuu mana barnootaa tokko hingaleen maqaa dr. jedhamu argateera. Haaluma kanaan nus Qeerroon Amboo yeroo dhiyoo keessatti tarkaanfii hamaa kan irratti fudhannuufi gumaa ijoollee keenyaa kanas kan baafnu ta’uu Oromoo maraaf waadaa galla.
Kan inni galu Yunivarsiiticha keessa ta’us yeroo inni gadi ba’u konkolaataasaa faana lafeefi lubbuusaa nidhabamsiifna. Dabalataanis hayyuu salphataa Wayyaanee waliin walii galee dhiiga ijoollee keenyaa dhuge Dr. Mitikkuurrattis tarkaanfii kana fakkaatu kan fudhannu ta’uu ni beeksifna.
Keessumattuu kan har’a barattoota Oromoo 8 jeequmsa kaastanii mooraa fi magaaalaa Amboo,akkasumas mootummaa irratti fonqolcha kaastan jechuun barnoota isaanii irraa waggaa 1f isaa ol ari’e! Barattoota ari’aman kana keessatti kanneen bara kana eebbifaman kan argaman yoo ta’an maqaan isaanii:……. 1.Morkaa Qananii Olaanaa 2.Yoonaas Alamuu Raggaasaa 3.Awal Muhammed 4.Ismael Mitiku 5.Biqilaa Galmeessaa 6.Fayisaa Baqqalaa Roobee 7.Hundeessaa Abarraa 8.Tafarraa Aagaa kanneen jedhaman faa keessatti argamu!
Previous The Rise and an Imminent Fall of a Minority Regime-TPLF
Next U.S. senators urge kerry to press Ethiopia respect human rights